မသင်မနေရအခြေချ: သဘောတူသို့မဟုတ်သဘောမတူရန်? | Law & More BV
ဘ‌‌လော့ခ် » မသင်မနေရအခြေချ: သဘောတူသို့မဟုတ်သဘောမတူရန်?
အကြွေးတင်မဆပ်နိုင်သည့်မြီရှင်တွင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွက် file နိုင်ပါတယ် ခြှတျခွုံကမြှု သို့မဟုတ်ပြဌာန်းထားသောကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအစီအစဉ်မှဝန်ခံချက်လျှောက်ထား။ ကြွေးရှင်တစ် ဦး သည်သူ၏မြီစားနေသောဒေဝါလီခံရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ WSNP (Natural Persons Debt Restructuring Act) ကိုမြီစားသူအားမ ၀ င်ခင်သူသည်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကြွေးရှင်အားလုံးနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသောသဘောတူညီမှုရရှိရန်ကြိုးပမ်းသည်။ အကယ်၍ ကြွေးရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ် ဦး ထက်မကသဘောမတူပါကမြီစားသည်ငြင်းဆန်သောကြွေးရှင်များအားအခြေချရန်သဘောတူရန်တရားရုံးသို့တောင်းဆိုနိုင်သည်။
မသင်မနေရငွေပေးချေမှုကိုပုဒ်မ ၂၈၇ (က) ဒေဝါလီခံခြင်းအက်ဥပဒေတွင်ပြဌာန်းထားသည်။ WSNP သို့ ၀ င်ခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်အတူတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြွေးရှင်သည်မသင်မနေရအခြေချမှုအတွက်တောင်းဆိုမှုကိုတရားရုံးသို့တင်ပြရမည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ငြင်းဆန်သောကြွေးရှင်များအားလုံးကိုကြားနာခြင်းသို့ဆင့်ခေါ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောကာကွယ်မှုကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ သင်အသင့်အတင့်ရှိသောသဘောတူညီမှုကိုငြင်းဆန်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုတရားရုံးကအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ သင်ငြင်းဆန်ရန်သင်၏စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ထိုငြင်းဆန်မှုကြောင့်ထိခိုက်သောအခြားကြွေးရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်အချိုးမညီမျှမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်တရားမျှတမှုမရှိဟုထင်မြင်ယူဆပါကသင်ကြွေးမြီဖြေရှင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုသဘောတူရန်ငြင်းဆန်။ မရပါကမဖြစ်မနေအခြေချရန်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကမ်းလှမ်းထားသောအခြေချမှုကိုသဘောတူရန်လိုအပ်ပြီးသင်၏တောင်းဆိုချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးငွေကိုလက်ခံရပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ငြင်းဆန်သောကြွေးရှင်အနေဖြင့်တရားစွဲဆိုမှု၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုသင့်အားအမိန့်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ မသင်မနေရငွေပေးချေမှုကိုမချမှတ်ပါကအနည်းဆုံးအကြွေးတင်သူသည်တောင်းဆိုမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသရွေ့သင့်ကြွေးမြီအားကြွေးမြီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွင် ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟုတ်၊ မဟုတ်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုအပြည့်အဝပေးချေပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပေးငွေသို့မဟုတ်သဘောတူငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်ကိုသင်သဘောမတူပါ။
ကြွေးမြီကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်အဆိုပြုချက်ကိုလွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်သူ (ဥပမာ - စည်ပင်သာယာချေးငွေဘဏ်) ကအကဲဖြတ်သည်။
ဤအမှုများကိုတရားသူကြီးကမည်သို့စစ်ဆေးသည်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်ဥပမာတစ်ခုကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ Den Bosch ရှိအယူခံတရားရုံးရှေ့မှောက်တွင်  အငြင်းပွားမှုရှိသောဖြေရှင်းမှုအောက်ရှိသူ၏ကြွေးရှင်များအားပေးဆပ်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုသည်သူသည်ငွေရေးကြေးရေးအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည့်အစွန်းရောက်မှုဟုမှတ် ယူ၍ မရပါ။ ။ မြီစားသည်ငယ်ရွယ်သေးသည် (၂၅ နှစ်) ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်အသက်အရွယ်ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ဝင်ငွေမြင့်မားသောစွမ်းရည်ရှိကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အချိန်တိုအတွင်းတွင်အလုပ်နေရာချထားမှုကိုလည်းပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်မြီစားသည်လစာရသောအလုပ်တစ်ခုရနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အမှန်တကယ်အလုပ်အကိုင်မျှော်မှန်းချက်များကိုကမ်းလှမ်းထားသောကြွေးမြီများပေးသည့်အစီအစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပြof္ဌာန်းထားသောကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ရလဒ်သည်ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှစနစ်တကျဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ငြင်းဆန်သောကြွေးရှင် DUO ၏ကြွေးမြီမှာစုစုပေါင်းကြွေးမြီပမာဏများစွာရှိသည်။ အယူခံတရားရုံးက DUO သည်သဘောတူညီချက်ကိုသဘောတူရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။
ဤဥပမာသည်ပုံဥပမာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ အခြားအခွအေနမြေားလည်းပါဝင်ပတ်သက်ရှိခဲ့သည်။ ကြွေးရှင်သည်အငြင်းပွားဖွယ်သဘောတူညီမှုကိုသဘောတူရန်ငြင်းဆန်နိုင်ခြင်းရှိမရှိတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အချက်အလက်များနှင့်အခြေအနေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မသင်မနေရအခြေချမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှေ့နေတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ သူတို့သည်သင့်အတွက်အကာအကွယ်တစ်ခုရေးဆွဲနိုင်ပြီးကြားနာခြင်းကာလအတွင်းသင့်အားကူညီနိုင်သည်။
 အယူခံတရားရုံး 's-Hertogenbosch9ဇူလိုင် 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101 ။
 အယူခံတရားရုံး 's-Hertogenbosch 12 2018ပြီ 2018, ECLI: NL: GHSHE: 1583: XNUMX ။
ယခင် Post မှ Tequila ပflိပက္ခ
Next Post လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအက်ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား၏တာဝန်ဝတ္တရား